Rajoelina / TGV / MAPAR : Hanao amboletra haka Fanjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaRajoelina / TGV / MAPAR : Hanao amboletra haka Fanjakana
15/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noho ny fampanantenana MIAMI sy fiara mandeha anaty rano, sy fambolena “Coton de Tulear ”, ary ny fanitrihina “puce” any anatin’ny omby, dia nanantena mafy i Andry Rajoelina sy ireo ekipany fa ho lany amin’ny fihodinana voalohany. Tsy araka izay anefa no nitranga, fa raha ny vokatra avy eny amin’ny CENI dia tsy azo ihodivirana ny fisian’ny fihodinana faharoa amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity.
Hatreto dia samy lavitry ny 50% ahafahana mibata ny fandresena avokoa ireo kandidà mpifaninana rehetra. Ity tranga ity no mahatezitra mafy ireo mpanara-dia ny kandidà faha-13, ka nahatonga azy ireo namorona olana vaovao, ahafahana miditra amin’ny fanakorontanana ny firenena. Nesorina teny amin’ny CENI matsy ireo solontenan’ity kandidà ity, fito andro taorian’ny nanatanterahina ny latsa-bato, ary nanaovana fanambarana niezinezina mihitsy izany ny amin’ny hoe tsy mandeha any amin’ny izy ny fikirakirana ny vokatra azon’ity andrim-panjakana ity.
Omaly hariva dia nampitenenina indray ireo solombavambahoaka manohana ity kandidà laharana faha-13 ity, ary nanao teny feno fampihorohoroana sy filam-baniny, ary nila voatsiary. Mody nahodinkodina tany amin’ilay “Logiciel” ampiasaina amin’ny fikirakirana ny vokatra any anivon’ny CENI aloha ny resaka. Vaky ihany anefa avy eo fa te hanao amboletra amin’ilay filazana, fa lany tamin’ny fihodinana voalohany ny kandidà tohanan’izy ireo.
Raha averina kely ny tantara, dia ireto depiote ireto no efa nampiasain’i Andry Rajoelina tamin’ny fanakorontanana ny firenena ny faha-21 aprily 2018 lasa teo. Ny tanjona tamin’izany dia ny nanesorana ilay andininy mamaritra ny vola azon’ny kandidà ampiasaina tao anatin’ilay lalàm-pifidianana. Nikorontana tokoa ny firenena tamin’izany, ary tsy niala teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ireto depiote ireto raha tsy tratran’ny naniraka azy ny tanjona. Izany hoe efa mandrangaranga ireo tompomenakeliny indray ity kandidà ity amin’izao fotoana izao. Tranga midika fa rehefa tsy arahina ny heviny, dia akorontany ny firenena. Efa vonona rahateo ireo manam-pahaizana manokana momba izany, dia ireto depiote ireto. Tsy gaga araka izany ny rehetra raha toa ka hiantso korontana indray ireto depiote ireto tsy ho ela. Ny tsy tokony hohadinoina anefa dia mbola tsy levon’ny vavonin’ireo vahoaka teny amin’ny 13 Mai ny fitaka natao azy ireny, taorian’ny fizaran-tseza nataon’ny Mapar sy ny firongony.
Ny Faritanin’i Mahajanga indray no saika lasibatry ny korontana miharo fandrobana tahaka ny nitranga teto Antananarivo ny faha-26 Janoary 2009. Mikasa ny hamerina ny zava-nisy tamin’ny taona 2009 mantsy ry Andry Rajoelina sy ny forongony, ...Tohiny